Izinsiza zokuhamba: bhuka amahhotela, sesha izindiza, izimoto eziqashisayo, ...
Ngabe ukhona uhlela uhambo futhi udinga usizo?. Ngemuva kwalokho le webhusayithi yilokho kanye okufunayo. Vuliwe imvvbhebh.ru sinalo lonke ulwazi oluhamba phambili mayelana nezindawo eziyinhloko zabavakashi emhlabeni. Nsuku zonke sishicilela izindatshana nge amathiphu wokuhamba, izindawo ongeke uziphuthe, amabhishi amahle kakhulu, isimo esimangalisa kakhulu, i-gastronomy enhle kakhulu nokunye okuningi.
Singakusiza ngohambo lwakho?
Futhi uma ulungiselela uhambo oluphephile lokho udinga usizo ukuze ubhukhe amahhotela, sifuna izindiza, ukuqasha imoto eqashisayo,… futhi konke lokhu ngentengo engcono kakhulu nazo zonke iziqinisekiso zemakethe. Kuthiwani uma? Yebo, lapha nathi singakusiza. Sebenzisa izinjini zokusesha ezilandelayo ukuthola intengo eshibhe futhi ukhathazeke ngokujabulela amaholide akho.
Lapha uzothola ukunikezwa kwehhotela okungcono kakhulu. Thola futhi ubhukhe ihhotela lakho ngezimo ezihamba phambili, ngemizuzu embalwa nangazo zonke iziqinisekiso.
Elinye lamaphuzu abalulekile ukuthola ihhotela lapho singahlala khona futhi siphumule ngezinsuku zeholide. Ngalokhu, akukho okufana nokukhetha okuhle kakhulu amahhotela ashibhile atholakala emhlabeni wonke. Yize ucabanga ukuthi kungaba umsebenzi onzima, ngeke kube nzima kangako ngenjini yokusesha yamahhotela. Ngale ndlela, kufanele sicabange kuphela ngendawo lapho sifuna ukulahleka khona izinsuku ezimbalwa.
Uma sesikucacisile, sikubhala kubha yokusesha. Ngemuva kwakhe, okusele ukunquma ngosuku nenyanga esizoyichitha siphumule. Ukwenza lokhu, ungabona ukuthi ikhalenda ikhonjiswa kanjani. Ngale ndlela, kuzoba lula nakakhulu ukukhetha izinsuku. Ekugcineni, uzoba nenketho yokukhetha inani labantu.
Uma sezigcwalisiwe, zizovela okunikezwayo okungcono nokukhushulwa amahhotela asendaweni ekhethiwe. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha izinketho ezikhangayo njengamahhotela afaka konke noma lezo ezikunikeza ibhulakufesi kuphela. Manje kufanele uhlole ukuthi kuthanda wena yini bese ukhetha phakathi kwalezi zinketho ezahlukahlukene. Ngokuqinisekile bonke bazothanda wena!
Hamba lapho uhambela khona sinendiza yakho ngentengo engcono kakhulu. Sebenzisa injini yethu yokusesha futhi uthole indiza yakho ngeziqinisekiso ezigcwele futhi eshibhile kakhulu.
Sesha izindiza ngeRumbo
Sesha izindiza nge-eDreams
Sesha izindiza ngeSkyscanner
Sesha izindiza nge-Atrapalo
Sesha izindiza ngeLiligo
Sesha izindiza ngeLastminute
Uma sesivele sikhethe indawo esizoya kuyo, ngisho nehhotela lapho singahlala khona, kufanele sihlole ukutholakala kwezindiza. Awudingi inkinga eyengeziwe kunalena esisanda kukuchazela yona. Ekhasini elifanayo, ungathola injini yokusesha ye- izindiza ezishibhile. Ithuluzi elinakho konke ukukhetha izinzuzo ezinkulu futhi uzenze zitholakale kuwe.
Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi endizeni silahlekelwa yingxenye enkulu yesabelomali. Njengoba sonke singenabhajethi enkulu yamaholide, kufanele sikhame kancane. Vele, ngenxa yenjini enhle yokusesha, ungakhethela amadili endiza. Kuzovela amanani entengo amahle kakhulu nezinkampani ezibanikezayo. Ngendlela efanayo, umsuka nawo uzokhonjiswa, kanye nendawo okuyiwa kuyo namahora esikhathi esifanayo. Ngakho-ke, uma inesikali, kuzokhonjiswa futhi ngokucacile. Uma usugcwalise izinkambu eziceliwe enjini yokusesha, uzoba nazo zonke iziqinisekiso futhi umphumela ube ngamanani amangalisa kakhulu.
Thola imoto eqashisayo evumelana kangcono nezidingo zakho edolobheni oya kulo. Sinokunikezwa okukhulu kakhulu kwe- izimoto eziqashisayo kusuka kuwo wonke umhlaba futhi ngamanani amahle kakhulu.
Uma ungafuni ukuthatha imoto yakho, kepha uma ufuna ukuhambisa lapho uya khona ngokunethezeka okuphelele, ungakhetha nezimoto eziqashisayo. Ukugwema ukucela mathupha nokuthi ube nelungelo lapho ufika, ungakhohlwa injini yokusesha yemoto eqashisayo.
Kuyo ungafinyelela kahle kuzo zonke izinkampani ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, uma ubhuka online, ungazuza kwizaphulelo ezinkulu. Into engalokothi ibuhlungu. Vele, enye inzuzo yokubhukha imoto eqashisayo ukuthi uyakwazi ukuphatha ukubhuka kwakho. Lokhu ukuthi ungakuguqula noma ukukhansele.
Amathiphu lapho uqasha imoto
Ngaphezu kokuba yisinyathelo esilula, ngokusebenzisa injini yokusesha, kufanele ukwazi lokho imoto ngayinye inenani. Lokhu kuzochazwa ngokuphelele ekhasini ngalinye ozoba nokufinyelela kulo. Kuzohlala kuncike ohlotsheni lwemoto futhi kwesinye isikhathi ngisho nendawo esiqasha kuyo. Yingakho iRenault Clío noma iCitroen C1 noma iC4 kungezinye zezindlela ezingabizi kakhulu. Vele, njengoba sikutshela, ngaso sonke isikhathi kufanele uyihlole kuwebhusayithi ngayinye futhi ufunde izimo kahle.
Bhuka noma nini lapho ungakwazi ngaphambili. Sazi kahle kamhlophe ukuthi izinsuku zesizini ephezulu njalo zenza amanani abize kakhulu. Ezinye izinkampani zidinga ukuthi umshayeli angabi ngaphansi kweminyaka engama-25 ubudala, kepha ezinye izindleko zingangezwa. Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ushiye ithangi likaphethiloli njengoba silitholile. Kungakho, lapho kungenzeka khona, sizokhetha inqubomgomo esekwe ethangini eligcwele / eligcwele. Ngale ndlela sizogwema isimanga futhi sizokwazi ukugcwalisa uphethiloli lapho usifanela khona, inqobo nje uma singawushiya ugcwele.
Thatha umshuwalense wokuhamba
Uma uzothatha uhambo lokuya phesheya futhi ufuna ukugwema noma iluphi uhlobo lwezinkinga, umqondo omuhle ukuthatha umshwalense wokuhamba. Umhlinzeki wethu we-IATI Insurance inikeza ububanzi obubanzi bomshuwalense wokuvakasha ukuze uhambisane nezidingo zakho. Ngaphezu kwalokho, ngokuthola umshwalense wakho ngewebhusayithi yethu uzokujabulela isaphulelo esingu-5% maqondana namazinga ajwayelekile.
Inqubo yokwenza umshwalense wesivumelwano ilula kakhulu, kufanele nje:
Ngena iwebhusayithi yomshwalense ngokuchofoza lapha.
Khombisa indawo ohlala kuyo, indawo ozoya kuyo nezinsuku
Chofoza inkinobho «Bala isabelomali» futhi usuqedile
Kuleli qophelo ithuluzi likunikeza ikhathalogi yonke yemikhiqizo eliyitholile kuhambo lwakho ngamanani angcono kakhulu. Khetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho bese ugcwalisa imininingwane yakho ukuze uyiqashe futhi USUVELE UNOMSHUWALENSE WAKHO.
Chofoza lapha ukubhuka umshuwalense wakho wokuhamba ngesaphulelo esingu-5%
Izindawo ezihlala izivakashi eziningi unyaka ngamunye
Enye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi yiFrance. Kungenile indawo yokuqala, ngokusho kocwaningo olushicilelwe. Kuyona kuphawulwe ukuthi cishe abantu abayizigidi ezingama-85 bakhethe le ndawo futhi-ke, kufanele kuthiwe akuyona eyaphansi. Kunezinto eziningi ezikhangayo iFrance enazo. Abavakashi bakhetha i-Eiffel Tower njengenye yezindawo okumelwe kubonwe kuzo. Abanye baba nesibindi sokuyigibela, kuyilapho abanye becabanga ngayo ngaphandle futhi ikakhulukazi lapho kushona ilanga.
Ngaphandle kwemigqa emide, iLouvre nayo iyadingeka. Okuthile futhi esikushoyo nge-Notre Dame Cathedral. Futhi akufanele sikhohlwe ukuvakashela enye yezindawo ezithandana kakhulu nabantu, yize kule ndawo umuntu ngamunye enalezi zihlungi. IMont Saint Michel, indawo ebiyelwe enesonto okufanele libonwe ukucabanga ngobuhle bayo bangempela. I-Arc de Triomphe, iBasilica yeNhliziyo Engcwele ngakho-ke ngingahle ngibhale uhlu lwezindawo okufanele uzibone, okungenani, kanye empilweni yakho.
Enye yezindawo enezivakashi eziningi, futhi ebekwe ngemuva kweFrance, yi-United States. Ngaphakathi kwazo, kunezindawo ezinabantu abaningi kunezinye. Vele, isivakashi sicacile.
Times Square: Isikwele esidumile esiseNew York sibona izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-40 zidlula minyaka yonke. Nje ngokubonakala kwayo okuhle okugcwele izibani, kuyenza ibe yisibopho sokuma.
ICentral Park: Enhliziyweni yeManhattan, sithola leli paki elihle, esesike salibona nakumabhayisikobho amaningi. Cishe izigidi ezingama-35 zezivakashi ziza minyaka yonke zizobona ubuhle bayo nobukhulu bayo.
Las Vegas: Ngubani ongakaze aphuphe ngokushada eLas Vegas?. Ngaphandle kokungabaza, enye yezindawo ezihlonishwa kakhulu. Hhayi ngale njongo kuphela, kepha nakumakhasino, imidlalo yomlingo noma ukwazi ukuvakashela iGrand Canyon.
IBoston: Idolobha elinefa elikhulu lamasiko. Ngaphezu kwalokho, asiyikhohlwa indawo yokudlela yamaCheers nokunikezwa kwayo okuhle kokudla.
ISan Francisco: Elinye lamadolobha avakashelwe kakhulu e-United States. Inokufinyelela okuhle kukho konke ekuhlinzekayo, ngoba ngeke kudingeke sihambe ibanga elide ukubona konke esikudingayo.
Los Angeles: Asikwazanga ukukhohlwa iLos Angeles. Izintaba, ukuheha izivakashi kanye nokunethezeka okuphumayo kuyisidingo.
ISpain is in indawo yesithathu yalabo abavakashelwa izivakashi. Ngaphakathi kwalokhu, sinezindawo zokuthola konke ukuthanda. Mhlawumbe, izivakashi zikhetha iMosque yaseCórdoba, i-Alhambra eseGranada neLa Sagrada Familia eBarcelona, ​​njengezindawo ezihamba phambili kuzo zonke izibikezelo. ISeville neReales Alcázares yayo nayo ayikude emuva ukuvakashelwa okukhulu. Ngasenyakatho, iCathedral yaseSantiago de Compostela iyindawo yokuhlangana yabahambi nabathandi bezobuciko. I-Aqueduct yaseSegovia noma iCathedral yaseBurgos ithathwa njengezindawo eziningi zabavakashi.